Home » Creative Writing » ကြည့်ခဲ့ဖူးသော….
စာကြွင်း။ ။ တပေါင်းလပြည့်နေ့က စိတ်ကူးရပြီး ရေးထားတဲ့စာလေးပါ။ ကွန်ပြူတာ စာမစီဖြစ်လို့ ပျင်းလို့ ရွာထဲမရောက်လိုက်ဘူး။ သားတော်မောင် စာအုပ်ရှာရင်း ရေးထားတာလေးပြန်တွေ့လို့။ ခု.. တော်သတင်းလပြည့်ကျော်ပြီဆိုတော့ သိပ်မကြာသေးဘူး ခုနစ်လလောက်ပဲ ကြာသေးတာလို့…
မသိဘူး မမှီ ရှေ့မှီ နောက်မှီတွေ မေးကြည့်ပေါ့
အင်း…. ရိုးရိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်တွေက နားလည်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်….။ သည်အရွယ်ကြီးကြမှကွာ မရိုးလို့ကော ဘာလုပ်လို့ရမှာလည်း။ မရိုးချင်မှတော့ အကိတ်လေးတွေနဲ့ပဲ မရိုးမှာပေါ့တဲ့
အမေတို့ကဘယ်တုန်းကမှခွင့်မပြုလို့ပွဲမကြည့်ဖူးဘူး အရမ်းပူဆာလွန်းလို့ ရွာမှာလာကတဲ့ အငြိမ့် မပြီးခင်တစ်ခေါက်ကြည့်ဖူးပါရဲ့ ၅မိနစ်မကျော်တောင်မကျော်သေးပြန်မယ်ဆိုလို့ ပြန်ခဲ့ရပါရော။မိုးကြိုးငှက်ငယ်
အေးလေ တို့တုန်းက အဒေါ်တွေက အပျိုတွေမို့ လိုက်ရသေးတာ။
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူပွဲလည်း တခါလားကြည့်ရတယ်။ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေနဲ့ နောက်တော့ ကြည့်ရတော့ဘူး။ လူများရင် အန္တရာယ်များတယ်ဆိုပြီး မသွားရဘူး။
ရေးသားချက်လေး ညက် ချက် မမှီရေ။
ပြောချင်တာကပေါ့နော် ၄၀ကျော် အချစ်တွေကိုပေါ့နော်။ အပေါ်ကဟာတွေက စကားခေါ်တာပေါ့နော်။
ဒါဆို မြန်မာ မပီသသေးဘူးပေါ့ကွယ်။
ပုဂံကို အခေါက်ခေါက်ရောက်ဖူးလဲ မရိုးထပ်သွားချင်တုံးပါဘဲ..
နန်းခင်မွှေးတို့ နန်းဝင်းတို့အဖေက ရွှေနန်းတင်
ငယ်ငယ်တုန်းက ကြည့်စရာကလည်း ဒါတွေပဲ ရှိတော့ ဒါပဲ ကြည့်ရတာ။ ခုခေတ်တော့ ဖျော်ဖြေရေးတွေ စုံလာတော့ သိပ်ပြီး တခုတ်တရ မကြည့်ကြတော့ပါဘူး။
တခါတလေတော့လည်း ဘ၀တကွေ့မှာ တခဏ ဆုံဖူးခဲ့တာမို့ သတိတရ ရှိနေကြမှာပါ။ တကယ်လည်း အပြင်မှာ အဲ့သည်လိုတွေ ရှိတာမို့ သီချင်းရေးတဲ့သူက တကယ်ကို တော်တယ်လို့
နန်းမြေသိမ့်သိမ့်တုန် မဟုတ်ပါ မိုးမြေသိမ့်သိမ့်တုန် ပါရှန်
ပွဲဈေးတွေ ပြဇာတ်တွေကို ငယ်ငယ်က သဘောကျခဲ့ပေမယ့်